"Espa lipon" - gepatoprotektor senzelwe ukukhokhela lipid ne-carbon exchange. Umuthi ziwumthwalo antioxidant omuhle, protivointoksikatsionnym, isenzo glycemic.
"Espa lipon" nesiyalo izidakamizwa kunikeza incazelo eningiliziwe kukhishelwa ngesimo amaphilisi, isixazululo nemijovo. Isithako asebenzayo kanye nenye fomu thioctic acid (α-lipoic).
"Espa lipon 100" kuyinto tablet eyindilinga igobolondo ophuzi, futhi uma ubona amaphilisi oblong, kusho! Espa lipon 600 ". Qaphela ibonisa ukuthi ngaphandle kokukhonza thioctic acid, umkhiqizo iqukethe Silica elisizayo, magnesium stearate, lactose , i-cellulose kanti ezinye nezinye izingxenye.
Nezinsizasenzo uketshezi "Espa lipon" amanzi.
lokhu izidakamizwa Isebenza kanjani? It ulawula umzimba, ikakhulukazi carbohydrate, i-cholesterol ne lipid. Ngaphezu kwalokho, lokhu izidakamizwa kuvusa ukusebenza isibindi, kusiza umzimba ukuqeda ubuthi, ivikela hepatocytes kusukela isinyathelo nolaka ezihlukahlukene ezinobuthi.
"Espa lipon" unethonya neuroprotective. Lokhu kusho ukuthi umuthi okwazi inkanuko lipid peroxidation ku izicubu kwenzwa ngcono ijubane ukugeleza kwegazi endoneurial, ukusheshisa microcirculation kwezakhi nesivinini pulse izinzwa.
Lokhu kusiza ukuthuthukisa isimo iziguli motor peripheral ngenxa yokuthi ukuthi babe nezicubu imisipha kwandisa umthamo ephezulu amandla compounds.
Ukuze odokotela linqume izindlela zesimanje "Espa lipon"?
• Iziguli abaphethwe polyneuropathy sikashukela kanye utshwala
• Abantu abane-hepatitis okungamahlalakhona, isifo sokuqina kwesibindi nezinye izinkinga zesibindi
• Ngo-ubuthi ezingamahlalakhona ngu izinsimbi ezisindayo, amakhowe acute ubuthi
• Ukuze ekuvimbeleni isifo sokuqina kwemithambo yegazi kanye nokwelashwa kwayo
Njengoba lisetshenziswe "Espa lipon"?
Nakuba ngokuthatha izidakamizwa akuxhomekile ukudla: lingase lithathwe ngaphambi nangemva kwalo. Izibhebhe akunconywa ukuhlafuna, nje yokufuna ephelele ingilazi uketshezi. Ngokwemvelo, izinga incike uphethwe.
Ngokwesilinganiso, umthamo kungaba azimisele ngakho.
Ngo polyneuropathy sikashukela ukuthatha ngesikhathi esifanayo usuku noma 600 mg umthamo ukwehlukana reception ku 2-3 izicucu. Ezimweni ezimbi kakhulu, umthamo kungenziwa bayovuswa ukuze 1200mg.
Uma udinga umjovo, ngokuvamile ziqala lapho umuntu eba i ukumnika ka mg 600 kanye ngosuku, bese uya ku-iphilisi. Ukuphathwa kanjalo kungase kuhlale kufikela kuzinsuku ezingu-20.
Ukuze ukuvimbela izifo noma ezimeni isibindi ukungasebenzi Isikali amabanga kusuka 200 kuya ku-60 mg.
"Espa lipon", kwezinye, efana izidakamizwa kakhulu kungabangela ukusabela ezingezinhle. Lezi zihlanganisa iphika, uhudo iziyaluyalu, isicanucanu, ikhanda. Ngezinye izikhathi kungase kubonakale sengathi urticaria nezinye komzimba. Ziyakwazi cishe ngokushesha nje ngemva ukuqedwa amaphilisi noma umthamo ukulungiswa.
Ukuze contraindicated lo muthi? Iqembu iziguli esinjalo kubaluleke ngempela ebanzi, sifaka ukuhlupheka
• Okungalapheki ukuphuza kanzima noma ukuba umlutha wotshwala
• Ububi lactase
Odokotela bebaphikisana ngani ukuthi linqume izidakamizwa ukuze intsha engaphansi kwengu-18, ukhulelwe noma lactating. Uma udokotela ecabanga kufaneleka ukusebenzisa "Espa lipon" kulezi zimo, ke ubophekile ukuba sithathe Isikali ngabanye futhi afeze ukuqapha okuqhubekayo.
zazingekho amacala ukweqisa izidakamizwa kubika.
"Espa lipon" ikhiqizwa eJalimane. Sine izidakamizwa analogue "Lipamid", "Lipoic acid", "Lipotiokson", "Oktolipen", "Teolipon", okuyinto akhiqizwa eRussia, izidakamizwa German "Thiogamma", "Thioctacid" Valium 300.
On zibheke kwesicelo Isifaniso esikhundleni "Espa lipon" kufanele ubonane nodokotela.
Tablets "Redugaz": izibuyekezo zamakhasimende, ukwakheka, yokusetshenziswa
Kanjani ukubala cubic umthamo ugodo endlini?